मेरी बैनी – मझेरी डट कम
दाइ ! के छोरीचेलीको जिन्दगी नै होईन ? के हामी छोरीहरू यो संसारमा दुःख भोग्न नै आएका हौं ? केटाहरूले निकै परसम्म लखेटे । अलि पर पुगेर म पुल मुनि पसें । केही छिनपछि निस्किएर अन्धकार सडकमा हिड्न थालें । फेरि एउटा कारपछि लाग्यो । दाइ मर्न पनि सारै गाह्रो हुँदोरहेछ । कतै नदीमा फाल हानेर मरुँ लाग्यो । ढुङ्गा हातमा लिएर आफ्नै भाग्य फोरुँ लाग्यो । यो कस्तो जिन्दगी दियौ आमा ! संसारमा छोरी भएर बाँच्न कोही नपरोस् । म भागें दाइ, कुनै पागल केटी जस्तै भएर गाडीको अघि अघि भागें । जिउभरि रगतको टाटा थियो । फोहरले पुरै जिउ गनाएको थियो । गुहार माग्दै सडक नै सडक भागें । आँशुले बाटो ठम्याँउन सकिन । अन्ततः लडें । कार नजिकै रोकियो । मैले दुई हात जोडेर रुँदै मलाई छोडी दिन विन्ती गरें । उनीहरूको खुट्टा समाएर ढोगें । मध्यरातमा काठमाण्डुको सडकमा डाँको छोडेर रोएँ । तर दाइ ……… एउटा हत्केला मेरो आँशुको भेलमा स्पर्श गर्न आईपुग्यो । उठेर हेरें । उनै अञ्जली दिदी थिइन । मलाई अङ्गालोमा कस्नु भयो । यो विपतमा स्वयमः भगवान नै अञ्जली दिदी बनेर आउनु भए जस्तो लाग्यो । उहाँको ममतामयी अङ्गालोमा मैले आफ्नो विछिप्तिएको मुटु विसाएँ । दुई आँखाबाट बगेको आँशुको झेल रोकिएन । हिक्क हिक्क गरेर धेरै बेर उहाँको काखमा रोईरहें ।
“भाइ म तिम्रो बैनीको साथी अञ्जली । हिजो साँझ हामी बारमा जान लाग्ने बेलामा एउटा भ्यान आएर जवरजस्ति तिम्रो बैनीलाई लिएर गयो । मैले तुरुन्तै पुलिसलाई रिपोर्ट गरें । तर भाइ हामी धेरै ढिला भयौं । बैनीको पेटमा उनीहरूको पाप हुर्किरहेको थियो । उनीहरूले बागमति किनारमा मारेर फालि दिएछन् ।”
मेरी बैनी चिच्याउदै भन्दै थिई, “दाइ आफ्नै आगनमा पराई हुन बाध्य पार्ने यो समाजको चलन कहिले फेरिन्छ ?”